China Soft PVC Photo Frames mveliso kunye nabenzi | SJJ
Isakhelo seFoto yePVC ethambileyo sisixhobo esihle sokubonisa ubomi bakho obuthandekayo kungekuphela endlwini yakho okanye kwidesika yakho, kodwa nakwezinye iimeko ezinje ngomboniso okanye umboniso. Yenziwe ngezinto ezithambileyo ze-PVC, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo. Uphawu olomeleleyo lunceda ukukhusela iifoto, ungophuli njenge g ...
Isakhelo seFoto yePVC ethambileyo sisixhobo esihle sokubonisa ubomi bakho obuthandekayo kungekuphela endlwini yakho okanye kwidesika yakho, kodwa nakwezinye iimeko ezinje ngomboniso okanye umboniso. Yenziwe ngezinto ezithambileyo ze-PVC, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo. Uphawu oluzinzileyo lunceda ukukhusela iifoto, ungaphuki njengeglasi. Kwaye iPVC ethambileyo ichasene namanzi ukukhusela iifoto. Zingasetyenziselwa ixesha elide, akukho mfuneko yokutshintsha rhoqo, kungekuphela nje ukuba nazo zonke iintlobo zeemilo kunye nemibala, iilogo zinokuyilwa ngokwenu. Ii-2D okanye ii-logo ezingama-3D zingenziwa kwinto enye, kwaye iinkcukacha ezikhulu kuwe. Ukucwangciswa koyilo kulunge ngakumbi ngeli xesha langoku, kwaye iphakheji inokuba ezahlukeneyo ukukhusela izakhelo. Ngokuncamathisela okuxhasayo okwahlukeneyo kwii-angles ezahlukeneyo, iiPVC Photo Frames zityhila iinkalo ezahlukeneyo zeefoto. Siyakwazi ukuvelisa izinto ezikumgangatho ophezulu ngexesha elifutshane lemveliso.
Motifs: Die Struck 2D okanye 3D
Imibala: Unokutshatisa umbala wePMS
Ukugqiba: zinemibala ngokweemfuno zakho
Ukhetho oluQhotyoshelweyo oluqhelekileyo: Umnini weplanga, umnini wePVC, akukho siqhotyoshelweyo ekuxhaseni, ihhuku kunye nokunye.
Ukupakisha: 1pc / polybag, okanye ngokutsho isicelo loMthengi
Egqithileyo Soft PVC Bottle evulekileyo
Okulandelayo: Iibhanti zeWristb & Iisongo eziThambileyo
I-Fidget Spinner Bottle evulekileyo isitshixo
Ukuphosa iPewter Belt Buckles